Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị ikpochapụ gị iPhone akụkọ ihe mere eme. Site n'ime otú ahụ, ị ​​ga-nyak ụfọdụ ohere na Ya mere ekwe ka ị iPhone na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ọzọkwa, ị ga-akwụsị niile nke gị ọrụ metụtara. Nke a pụrụ ịbụ nnọọ uru bụrụ na ị hapụ ekwentị gị, ma ọ bụ onye ezuru ya.
Ikpochapụ gị dum iPhone akụkọ ihe mere eme, ị ga-eme ya ole na ole n'ebe dị iche iche. Ị ga-nweta gị Safari na ikpochapụ gị Safari nchọgharị akụkọ ihe mere. Mgbe ahụ, ị ​​ga-nweta gị oku akụkọ ihe mere, ozi eri na ihichapụ niile faịlụ aka. Luckily, e nwere usoro ihe omume gị Windows ma ọ bụ Mac kọmputa na ga ikpochapụ gị dum iPhone akụkọ ihe mere eme na nanị otu click. Na omume a na-akpọ Wondershare SafeEraser.
Part 1. Otu Pịa ikpochapụ ihe mere eme nile ndia na iPhone
Part 2. Common ụzọ ikpochapụ search akụkọ ihe mere eme na iPhone
Part 3. Common ụzọ doro anya ozi akụkọ ihe mere eme na iPhone
Part 4. Common ụzọ ikpochapụ ngwa cache on iPhone
Part 5. Common ụzọ ikpochapụ email cache on iPhone
Part 1.One Pịa ikpochapụ ihe mere eme nile ndia na iPhone
Wondershare SafeEraser bụ ọkachamara data erasing ngwá ọrụ na otutu nzube. A ngwa bụ zuru okè maka ihe ọ bụla iDevice. Bụ isi ọ bụ iji ehichapụkwa niile ozi nkeonwe gị site na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị hichapụ gị data aka, ọ ga-adị mfe natara site na iji ụfọdụ ngwaọrụ. Ọ bụ ya mere a ngwa-eji US Military spec overwriting technology, otú onye ọ bụla nke gị faịlụ nwere ike natara, ebi. Nke a bụ nnọọ uru ma ọ bụrụ na ị na-ere na ekwentị gị, ma ọ bụ bụrụ na ị na-atụfu ya ma ọ bụ ya Nwela zuru.
Ebe a bụ anyị mfe Nduzi na otú iji Wondershare SafeEraser maka ihichapụ gị iPhone akụkọ ihe mere eme.
Ikpochapụ gị dum iPhone akụkọ ihe mere eme nwere ike ugbu a mere na otu Pịa.
1. Open Wondershare SafeEraser ma họrọ ihichapu Private Data
2. Ihe omume ga na-akpaghị aka na-amalite nyochasịrị na scanning data na ngwaọrụ gị.
3. Ozugbo Doppler zuru ezu, niile gị onwe data ga-edepụtara dị iche iche edemede. Niile i nwere ime bụ ịhọrọ nke ọmụma ị chọrọ anọghịzi ya, ihe ọma. Mgbe ị na-eme otú ahụ, pịa ihichapu ugbu a.
4. Tupu ị ihichapu niile gị data, ị ga-enwe iji gosi omume gị site na iji kọmputa ede "Hichapụ" ke nyere igbe. Mgbe ahụ, pịa ihichapu Ugbu a ọzọ.
5. Ozugbo niile faịlụ na ị na họọrọ anọwo na-ehichapụ, ị ga-ahụ ndị na-esonụ ozi.
Na na bụ ya! Niile nke gị data e ehichapụ ole na ole dị mfe nzọụkwụ. Otú ọ dị, ị ka nwere ike ihichapụ gị faịlụ aka (ma onye ga-achọ mgbe ha hụrụ Wondershare SafeEraser?) Site ihichapụ gị search akụkọ ihe mere eme, nchọgharị akụkọ ihe mere eme, ozi akụkọ ihe mere eme, ngwa cache, na email cache iche iche. Ka anyị igosi gị otú.
Iji ikpochapụ search akụkọ ihe mere eme na gị iPhone, i kwesịrị ihichapu ihe nchọgharị gị na akụkọ ihe mere eme. Ebe ọ bụ na e nwere ihe karịrị otu nchọgharị maka iPhone, anyị ga-egosi gị otú ị ihichapu gị nchọgharị akụkọ ihe mere maka abụọ kasị ewu ewu iPhone nchọgharị - Safari na Google Chrome.
# 1. Doro Anya Safari Nchọgharị History na iPhone
1.From n'ụlọ gị gị na ihuenyo enweta na Ntọala icon na-emeghe Ntọala akara panel.
2.Locate Safari na ntọala ịchịkwa panel. Ozugbo ị na-ahụ ya, enweta na ya.
3.Once na ị na tapped na Safari icon, ịchọ Doro Anya History na weebụsaịtị Data bọtịnụ. Mgbe ahụ, enweta bọtịnụ.
4.The ikpeazụ nzọụkwụ bụ iji gosi na ị chọrọ ikpochapụ akụkọ gị.
# 2. Doro Anya Chrome Nchọgharị History na iPhone
1.In iji ihichapu Google Chrome nchọgharị akụkọ ihe mere, i kwesịrị ẹkedori ngwa mbụ.
2.Tap na Chrome menu (atọ obere kehoraizin edoghi) na mgbe ahụ chọta Ntọala menu.
3.Tap nzuzo bọtịnụ.
4.Click na Doro Anya Nchọgharị History bọtịnụ.
5.Confirm omume gị.
Mgbe ọ na-abịa ozi akụkọ ihe mere eme, ị nwere ike ihichapụ ihe dum mkparịta ụka na a onye, ​​ma ọ bụ (ọ bụrụ na ị na-eji iOS 9 ọ bụ karịa) ihichapụ naanị họrọ ozi. Ebe a bụ otú.
1.Tap na iPhone Ozi taabụ si n'ụlọ gị na ihuenyo.
2.Once na Ozi, enweta edit na họrọ eri na ị chọrọ deleted.Then, pịa delete.This ga-ehichapụ ozi niile si a ụfọdụ onye ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ.
Iji ihichapụ ụfọdụ ozi site na a na-akparịta ụka, ị mkpa na-emeghe na mkparịta ụka mbụ. Ozugbo ị bụ ná mkparịta ụka họrọ a ozi ị chọrọ ka ihichapụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ya n'ime a eri site na ịpị edit button, mgbe ahụ, Hichapụ.
Otú ọ dị, ihichapụ ozi dị ka nke a na-adịghị ihichapu ha na-adịgide adịgide. Ha pụrụ n'ụzọ dị mfe natara site n'inyocha a aha kọntaktị ma ọ bụ ụfọdụ Keywords si a ozi. Nanị ụzọ hichapụ ozi na-adịgide adịgide ga-abụ site na iji a ọzọ software, dị ka Wondershare SafeEraser.
Ikpochapụ ngwa cache, aka junk faịlụ, si gị iPhone nwere ike inye gị ngwaọrụ a ịrịba agbam ume na usoro nke ya ọsọ. N'ụzọ dị mwute, e nwere otu nhọrọ na gị iPhone ikpochapụ ngwa cache. Ị nwere ike ma ihichapụ naanị Safari cache, ma ọ bụ ihe ngwa si akwụkwọ na data. Ma, site ihichapụ ngwa si data ị nwekwara ike ihichapụ ụfọdụ dị mkpa faịlụ (atụ erasing Viber ngwa data nwere ike ihichapụ ihe oyiyi nile ị na natara na Viber).
Ikpochapụ Safari cache kọwara n'elu. Ebe a bụ otú ka ihichapụ ngwa data.
1.Go Ntọala> General ojiji> Jikwaa Nchekwa.
Enweta a chọrọ ihe na Documents na Data. Mgbe ahụ, unu niile nwere ime bụ slide achọghị ihe na ekpe na mgbata Hichapụ.
N'ụzọ dị mwute, ihichapụ email cache ozugbo gị iPhone agaghị ekwe omume, dị nnọọ ka ihichapụ ngwa cache. Ma, ihe i nwere ike ime bụ ka ihichapụ gị email Mgbakwụnye. Nwere ike ị gaghị enwe maara otú ukwuu ohere ndị a pụrụ isi Mgbakwụnye weghara. Ihe ngwọta kasị mma a ga-ihichapụ na akaụntụ email gị kpamkpam. Echegbula ị gaghị ida gị ozi ịntanetị, dị nnọọ ka enweghị isi Mgbakwụnye (nke ị nwere ike ibudata ọzọ e mesịrị bụrụ na ị chọrọ ha). Tupu ihichapụ gị email, jide n'aka na ị maara paswọọdụ gị.
Ka ihichapụ na akaụntụ email gị na-emeghe Ntọala na mgbe ahụ enweta na Mail, Ndi ana-akpo, Kalinda.
Mgbe ahụ, pịa na aha akaụntụ, pịgharịa gaa na ala na enweta Hichapụ Akaụntụ. Ozugbo ị na-eme otú ahụ, tinye akaụntụ gị ọzọ. Otú a, ị ga-akwụsị ihe niile nke na-enweghị isi email Mgbakwụnye na ka nwere ohere gị email.
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Kọwaa History na iPhone